August 2021 - SANTHITSA
သွေးသား နှင့် အရိုး ကျန်းမာရေးတို့ အတွက် ဇီးသီးခြောက် ( အမျိုးသမီးများအတွက်)
သွေးသား နှင့် အရိုး ကျန်းမာရေးတို့ အတွက် ဇီးသီးခြောက် အမျိုးသမီးများ အရိုးကျန်းမာရေးနဲ့ ဆီးသီးခြောက် အရိုးအတွက် ဆီးသီးခြောက် ( Dried pulms )က ကောင်းကျိုး တစ်ခုပေးပါတယ် ။ နေ့စဉ် ဆီးသီးခြောက် ၁၀ လုံးကို တစ်နှစ်ကြာ စားတဲ့ခါ လူလတ်ပိုင်းအရွယ် အသက်အရွယ် အမျိုးသမီးတွေမှာ အရိုးအားနည်းတာ သိသာစွာ နှေးကွေးသွားတယ်လို့ Florida State University မှ ဒေါက်တာ ဘာရင်မ်းအာ့ဂ်ျမင်ဒီက ဆိုတယ်။ ဆီးသီး ၁၀ လုံးက များတယ်ဆိုရင် တစ်နေ့ ၃ လုံးစားရင်တောင် ထူးခြားမူ ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဆယ်စုနှစ် များစွာ လေ့လာချက်အရ …
အပျိုပေါက်မလေးတို့ ဗိုက်မကြီးပေမယ့် ဗိုက်ကြီးတာထက်ဆိုးတဲ့ကိစ္စလေး မှတ်သားထားစေချင်
အပျိုပေါက်မလေးတို့ ဗိုက်မကြီးပေမယ့် ဗိုက်ကြီးတာထက်ဆိုးတဲ့ကိစ္စလေး မှတ်သားထားစေချင် အပျိုပေါက် ညီမလေးတို့ရေ.. ဗိုက်မကြီးသွားပေမယ့် ဗိုက်ကြီးသလိုပဲ ဆိုးရွားတဲ့ အကြောင်းလေး ဒီတစ်ခါ အကိုက ပြောပြချင်တယ် ချစ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ၊အပျော်ပဲဖြစ်ဖြစ် အတူနေကြပြီးတဲ့နောက် …. နောက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျိုးထဲမှာ (ဗိုက်ကြီးတာအပြင်) ဘဝပျက်စေလောက်တဲ့ အကြောင်းအရာ နောက်တစ်ခု ရှိပါသေးတယ်…… အဲဒါက ဒီခေတ်ထဲ အင်မတန်ခေတ်စားလှတဲ့ ဗီဒီယိုရိုက်ထားခြင်းပါပဲ..။ အကို့ဆီ မကြာခဏ ဖုန်းဆက် အကူအညီတောင်းကြတဲ့အထဲ အဲဒီ ဗီဒီယိုကိစ္စတွေက အကြောင်းအရာအများဆုံး..။ (ကိုယ်ဝန်ပြဿနာ ထက်တောင် များပြီး ကာယကံရှင်ရဲ့ အသိုင်းအဝိုင်းအလိုက် ရိုက်ခတ်မှုကလည်း ကြီးတယ်..) ချစ်နေ ကြိုက်နေတုန်းတော့ ကင်မရာရှေ့မှာ ပြုံးလို့ ပျော်လို့ အိုက်တင်တွေ မျိုးစုံပေးပြီး ဗီဒီယိုရိုက်ကြတာ …
မိန်းကလေးတွေရဲ့ စိတ်ကောက်တတ်တဲ့ စတိုင်ဆယ်မျိုး
မိန်းကလေးတွေရဲ့ စိတ်ကောက်တတ်တဲ့ စတိုင်ဆယ်မျိုး ယောကျာ်းလေးတွေမှတ်ထားနော် ၁။ မာကောက် မာကောက်ဆိုတာက ဘာလဲဆိုတော့ သူတို့က စိတ်ကောက်ပြီဆိုတာနဲ့ တစ်ကိုယ်လုံးက မာမာတောင့်တောင့်ကြီး ဖြစ်သွားတာခင်ဗျား အဲ့အချိန် သူ့လက်ကို သွားဆွဲကြည့် မရဘူး တင်းထားတာနော် မာမာတောင့်တောင့်ကြီး လုပ်ထားတာ သူ့ပုခုံးလေးကို ခင်ဗျားဘက်ယိမ်းအောင် အသာဆွဲပြီး တွန်းကြည့် မရဘူး တောင့်ထားတာ အဲ့ဒီလို စိတ်ကောက်ပြီဆိုတာနဲ့ တစ်ကိုယ်လုံးကို မာတောင့်ထားတတ်တဲ့ ကောင်မလေးတွေကို မာကောက်… ၂။ ဖြတ်ကောက် ဖြတ်ကောက်ဆိုတာက ဘာလဲဆိုတော့ သူတို့က စိတ်ကောက်ပြီဆိုတာနဲ့ ခင်ဗျားနဲ့ ရှိသမျှ အဆက်အသွယ် အကုန်ဖြတ်ပစ်တာ Facebook မှာ ဘလော့မယ် Viber, Phone ရှိသမျှ အားလုံး ဘလော့မယ်ဗျာ …
ယောကျာ်းများကြောက်သော မိန်းမအမျိုးစားများ ကြည့်ရတာ စိတ်ဝင်စားကြတဲ့အတွက် ထပ်တင်လိုက်ပါတယ်။ ကျွန်မလည်း ဒီ(၁၀)မျိုးထဲက အနည်းဆုံး (၇) မျိုးလောက်တော့ နည်းနည်းစီပါ ပါတယ်။ အချိန်ယူပြီး ဝင်ရောက်ဖတ်ရှု့တဲ့အတွက်လည်း ကျေးဇူး တင်ပါတယ်။ ဘယ်လို မိန်းကလေးမျိုးကို ယောက်ျားများ ကြောက်ကြပါသလဲ။ မိန်းကလေး တိုင်း (၁၀)မျိုးထဲတွင် တစ်မျိုးမက နှစ်မျိုးပါဝင်နေမည်မှာ ဧကန်မလွဲပင်။ သင်သည် ဘယ်လိုမိန်းကလေးမျိုးလဲ ကိုယ်ကို သုံးသပ်ဖူးပါသလား။ (၁) ညစ်ပတ်သောမိန်းမ ညစ်ပတ်သောယောက်ကျားမှာ ချစ်သူရနိုင်သော်လည်း ညစ်ပတ်သော မိန်းကလေးကိုမူ နှာခေါင်းရှုံ့ ချင်ကြသည်။ မသန့်ရှင်းသော မိန်းကလေးများ၏ အိပ်ခန်းမှာ အမှိုက်ဗုံးများ ပေါက်ကွဲထားသလို ကျောချစရာမရှိအောင် ရှုတ်ပွနေတတ်သည်။ ပစ္စည်းတစ်ခု ပျောက်လျှင် လွယ်လွယ်နှင့် ရှာလို့မ ရတော့ပေ။ …
မိန်းကလေး တစ်ယောက် ရဲ့ (အိုး) တင် ၊ ရင် တွေကြည့်ပြီး အပျိုစစ် လား? မစစ်လား? ဝေဖန်နေကြတဲ့ တစ်ချို့ လူတွေ ဖတ်ဖို့
မိန်းကလေး တစ်ယောက် ရဲ့ (အိုး) တင် ၊ ရင် တွေကြည့်ပြီး အပျိုစစ် လား? မစစ်လား? ဝေဖန်နေကြတဲ့ တစ်ချို့ လူတွေ ဖတ်ဖို့ ယောက်ျားဆိုတာ မယုတ်မာ ဖို့ပဲ လိုတာပါ … မိန်းကလေးတစ်ယောက် ရဲ့ တင် ရင် တွေကြည့်ပြီး အပျိုစစ်လား မစစ်လား ဝေဖန်နေတဲ့ တစ်ချို့ကောင်တွေ မင်းတို့ရော လူပျိုစစ်ရဲ့လား?ရမလား စမ်းတာ ယောက်ျား သဘာဝလို့ မပြောပါနဲ့ အဲ့ဒီစကားတစ်ခွန်းကြောင့် မိန်းကလေးပေါင်းများစွာရဲ့ အရှက်သိက္ခာ နစ်နာမှုတွေ ဘယ်လောက်များပြီးလဲကိုယ်ချင်းစာမိရဲ့လား? အိုင်တွေ့လို့ ခြေဆေးမယ် ဆိုကတည်းက ကိုယ်ခြေထောက်က နဂိုကတည်းက မသန့်လို့ပဲ ဆိုတာသိထားပါ… ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က နှမချင်းစာနာတတ်တဲ့ စိတ် …
သုံးခှက ရကေနျ ကိုဗဈ ပြောကျတယျဆိုပွီး နစေ့ဉျ လူထောငျခြီ လာခပျနကွေ (ရုပျ/သံ)
သုံးခှက ရကေနျ ကိုဗဈ ပြောကျတယျဆိုပွီး နစေ့ဉျ လူထောငျခြီ လာခပျနကွေ (ရုပျ/သံ) ဧရာဝတီ၊ ဩဂုတျ ၆၊၂၀၂၁ ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီး သုံးခှမွို့နယျမှာ ရှိတဲ့ ရဲနှဲ့ ကြေးရှာရဲ့ နှဈ ၁၀၀ သကျတမျးရှိတဲ့ ရကေနျအတှငျးက ရဟော ကိုဗဈရောဂါ ပြောကျကငျးကွောငျး လူမှုကှနျရကျ စာမကျြနှာပျေါမှာ ပြံနှံ့နပေါတယျ။ ဒီသတငျးကွောငျ့ ရနျကုနျတိုငျးကတငျ မကပဲ မျောလမွိုငျ၊ ပဲခူး၊ ဧရာဝတီတိုငျးနဲ့ နပွေညျတျောက လူတှပေါ ဒီရကေနျမှာ ရလောခပျနကွေတာ တရကျကို လူဦးရေ ထောငျခြီ ရှိပါတယျ။ ကိုဗဈဝဒေနာ ခံစားခဲ့ရတဲ့ လူနာတဦးဟာ ဒီရကေို သောကျပွီးတဲ့နောကျ ပြောကျသှားတယျဆိုတဲ့ သတငျးတခုကနေ စပွီး အခုလို နစေ့ဉျလူထောငျခြီပွီး …
ခင်ပွန်းကို ပြန်ရောင်းဖို့ မယားငယ်ရဲ့ ကမ်းလှမ်းမှုကို လက်ခံခဲ့တဲ့ မယားကြီး
ခင်ပွန်းကို ပြန်ရောင်းဖို့ မယားငယ်ရဲ့ ကမ်းလှမ်းမှုကို လက်ခံခဲ့တဲ့ မယားကြီး အိန္ဒိယနိုင်ငံက အမျိုးသမီးငယ် တစ်ဦးဟာ ဖောက်ပြန်တဲ့ ခင်ပွန်းကြောင့် အမျိုးမျိုး စိတ်ညစ်ခဲ့ရပေမယ့်၊ သူမရဲ့ ယောက်ျားနဲ့ ဖောက်ပြန်နေတဲ့ မယားငယ်က ညှိနှိုင်းမှုတွေ ပြုလုပ် လာခဲ့ ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ ခင်ပွန်းကို ပြန်ရောင်းမယ် ဆိုရင် ရူပီး သိန်း (၅၀) ပေးမယ် ဆိုတဲ့ ကမ်းလှမ်းမှုပါ။ အဲဒီကမ်းလှမ်းမှုကို မယားကြီးဖြစ်သူက ကျေကျေ နပ်နပ် လက်ခံ လိုက်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒီအဖြစ်အပျက်ဟာ အိန္ဒိယနိုင်ငံ Karnataka မြိ့မှာ ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ မယားကြီး အမည်ကတော့ Ramya လို့ သတင်းမှာ ဖော်ပြ ထားပါတယ်။ …
ဘာသာစကားမြိုးစုံကို မှတျနအေောငျ ပွောတတျလို့ အရမျးနာမညျကွီးနတေဲ့ လမျးဘေးဈေးသညျလေး(ရုပျသံ) ကမ်ဘောဒီးယားနိုငျငံက အမှတျရလကျဆောငျ ပစ်စညျးတှကေို လမျးဘေးမှာ ခွငျးလေးလှယျပွီး လိုကျရောငျးရတဲ့ ဈေးသညျ ကလေးတဈယောကျရဲ့ဘာသာစကားမြိုးစုံကို မှတျထှတျနအေောငျ ပွောတတျတဲ့ ရုပျသံဟာ လူမှုကှနျယကျပျေါမှာ ပြံ့နှံ့ပွီး လကျတလော နာမညျကွီးနပေါတယျ။ အသကျ၁၂ နှဈဝနျးကငျြလောကျသာ ရှိသေးတဲ့ ကလေးလေးဟာ အနညျးဆုံး ဘာသာစကား ၉ မြိုးကို လညျပတျအောငျ ပွောနိုငျဆိုနိုငျပါတယျ။ သူပွောဆိုနိုငျတဲ့ ဘာသာစကားတှထေဲမှာ ထိုငျး၊ တရုပျ၊ ဂပြနျ၊ ဖိလဈပိုငျ၊ စပိနျ၊ မလေးရှား၊ ကိုရီးယား၊ ဂြာမနျ နဲ့ အင်ျဂလိပျ ဘာသာစကားတှေ ပါဝငျပါတယျ။ ဒီထကျပိုတဲ့ ဘာသာစကားတှလေညျး ပွောနိုငျကောငျး ပွောနိုငျပါလိမျ့မယျ့။တရုတျဘာသာမှာဆိုရငျ ကှမျတုံးလိုသာမက မနျဒရငျးလိုပါပွောဆိုနိုငျပါတယျ။ …
အသုံးအနှုနျး နညျးနညျးရိုငျးပမေယျ့ အှနျလိုငျးပျေါမှာ ပုံတငျတဲ့ မိနျးကလေးတိုငျး ဖတျသငျ့တယျ
အသုံးအနှုနျး နညျးနညျးရိုငျးပမေယျ့ အှနျလိုငျးပျေါမှာ ပုံတငျတဲ့ မိနျးကလေးတိုငျး ဖတျသငျ့တယျ Online ပျေါမှာ ပုံတငျကောငျးသော အဈမ ညီမလေးမြား မကြျောပဲ ဖတျပေးကွပါရနျ စိတျကူးနဲ့ မုဒိမျးကငျြ့ခွငျး ခံနရေတဲ့ သူ ဆိုတာ. . . … ဤစာစောငျကို ၂၀၁၃ မှာ ရေးသားခဲ့တာပါ ယခု မဖတျရသေးတဲ့ သူတှအေတှကျ ပွနျတငျပေးပါရစေ (စာရေးသူအသုံးအနှုံး ရိုငျးကောငျး ရိုငျးနိုငျပါတယျ… ဒါပမေယျ့ ပှငျ့လငျးစှာပွောတတျတဲ့အမူအကငျြ့ကွောငျ့ စာဖတျသူမြား နားလညျပေးစလေိုပါတယျ… ဒီစာကိုဆုံးအောငျဖတျကွညျ့ပါ… ဖတျပွီး ရငျထဲမှာ အမှနျတရားတဈခု သိရှိ လကျခံလိုကျကွရမယျဆိုရငျ ရေးရကွိုးနပျပါပွီ) Facebook ပျေါမှာ မိနျးမသားတဈခြို့ မှားယှငျးမှုတှေ နဲ့ သာယာနကွေတာတှရေ့တယျ… ပုရိသ …
ပညာလာမစမျးနကျ ကြုပျကို အလုပျခနျ့ရငျခနျ့ မဟုတျလို့ကတော့ ကလေးအဖေ နာမညျကိုပါ ဖျောလိုကျမှာ
ပညာလာမစမျးနကျ ကြုပျကို အလုပျခနျ့ရငျခနျ့ မဟုတျလို့ကတော့ ကလေးအဖေ နာမညျကိုပါ ဖျောလိုကျမှာ တဈခါတုနျးကပေါ့….. ဝိုငျထုတျတဲ့နရောမှာ ဝိုငျအရညျအသှေး ကောငျးမကောငျး မွညျးရတဲ့ ကြှမျးကငျြသူ ကှယျလှနျသှားလို့ လူသဈအစားထိုးခနျ့ရနျ လိုအပျကွောငျး ကွျောငွာပါတယျ။ မကွာခငျမှာပဲ အဝတျအစား ဖွဈကတတျဆနျးနဲ့ရခြေိနျမှနျနပေုံရတဲ့ လူတဈယောကျ အလုပျလာလြှောကျပါတယျ။ လူက ကွညျ့ရတာ အခြိနျပွညျ့ မူးနပေုံ ရတယျဆိုပွီး ကုမ်မဏီပိုငျရှငျ ဥက်ကဌက အစပိုငျးမောငျးထုတျမလို့လုပျပွီးမှ ကွျောငွာအရ လာလြှောကျတာမို့ဒီအတိုငျး ပွနျခိုငျးရငျမကောငျးတတျတဲ့အတှကျ စဉျးစားပွီး စကားပွောတယျ။ “ကောငျးပွီလေ..ခငျဗြား အရညျအခငျြးကို စမျးသပျလို့ကွိုကျရငျ ခနျ့မယျ… ခငျဗြားကို ဝိုငျ တဈမြိုးစီ ပေးမယျ ။ ခငျဗြား သောကျပွီးရငျ ဝိုငျအမြိုးအစားနဲ့ နာမညျကို ပွောနိုငျရငျ စာမေးပှဲ …